जम्मु–कश्मिरमा हमला गर्ने को हुन् मसुद अजहर ? « NBC KHABAR
जम्मु–कश्मिरमा हमला गर्ने को हुन् मसुद अजहर ?
एजेन्सी । विहीबार कश्मिरमा सरकारी सुरक्षा फौजलाई लक्षित गरी गरिएको आत्मघाती आक्रमणमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ४४ पुगेको छ । कश्मिरको प्रमुख शहरबाट करिब २० किलोमिटर टाढा राजमार्गमा गुडिरहेको सैनिक गाडीहरूको समूहलाई लक्षित गरी थापिएको विद्युतीय धरापमा परी कम्तीमा ४४ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको हो । जहाँ ७८ गाडीमा २५०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरु थिए ।